Yakapararira 2-Handle Yepamusoro-Arc Bathroom Faucet
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / Yakapararira 2-Handle Yepamusoro-Arc Bathroom Faucet Chrome
Yakapararira 2-Handle Yakakwira-Arc Bathroom Faucet Chrome
Kusimudza yako yekugezera kutaridzika neakakora dhizaini dhizaini, iyo Mairi Maoko Akabhururuka Nickel Bathroom Sink Faucet ichapa imba yako yekugezera isingaperi runako.
2321300C yekuraira mirairo
Sarudza nyika Åland IslandsAfuganisitaniArubhaniyaArujeriyaAmerican Samoathe nationalAngolaAngwiraAntarcticaAndiguya neBhabhudhaArgentinaArumeniyaArubha OsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniBhahamasiBhahareniBhangiradheshiBarbadosBherarusiBelauBherujiyamuBelizeBeninBhemudhaBhutaniBorivhiyaBonaire, Saint Eustatius na SabaBhoziniya neHezegovhinazimbabweBouvet IslandBhuraziriBritish Indian Ocean TerritoryBhuruneyiBharugeriyaBurkina FasoBurundiKambodhiyaKameruniKanadhaKepu VhedhiCayman IslandsYepakati Ripabhuriki AfrikaChadhiChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsKorombiyaKomorosiCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Zvitsuwa KukuKosita RikaKiroshiyaKiyubamuCuraçaoSaipurasiCzech RepublicDhenimakiJibhutiDhominikaRipabhuriki DhominikaEkwadhoEgyptE SavhadhoIkwetoriya GiniEritreaEsitoniyaIthiyopiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinirendiFuranziFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJerimaniGhanaGibhurataGirisiGirinirendiGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiAkanzwa Island uye McDonald IslandsHondurasHong KongHangariAisirendiIndiaIndonezhiyaIranIrakiAyarendiVechiwi ManIzirayeriItariIvory CoastJamaikaJapaniJerseyJodhaniKhazakisitaniKenyaKiribatiKuwetiKijisitaniLaosRativhiyaRebhanoniLesothoRaibheriyaRibhiyaLiechtensteinRituaniyaRukuzemubhoguMacaoMadhagasikaMalawiMarazhiyaMarudhivhuMaliMaltaZvitsuwa MasharoMartiniqueMauritaniyaMorishiyasiMayotteMekisikoMaikironezhiyaMorodhovhaMonakoMongoriyaMondenegiroMotseratiMorokoMozambikiMyanmarNamibhiyaNauruNeparoNetharenziNew CaledoniaNyuzirendiNikaraguwaNaijaNaijeriyaNyu Tsitsuwa NofokuMawodzanyemba KoriyaNorth MacedoniaMaodzanyemba Zvitsuwa MariyanaNoweyiOmaniPakisitaniPalestinian TerritoryPanamaPapa Nyu GiniParaguayPeruFiripainirhodesiaPorendiPutugaroPota RikoKwatakudzokeranaRomaniyaRashiyaRwandaSayo Tomu nePurinzipuSaint BarthélemySendi HerenaSendi Kitsi ne NevhisiSendi RusiyaSaint Martin (chiDutch chikamu)Saint Martin (French chikamu)Saint Pierre uye MiquelonSendi Vincent neGirenadhiniSamoaSan MarinoSaudhi ArabhiyaSenegalSerbiaSecheresSierra LeoneSingapowoSirovhakiyaSirovhinyiyaZvitsuwa SoromoniSomariaChamhembe AfrikaSouth Georgia / Sandwich IslandsChammhembe KoriaSouth SudanSpeiniShiri RangaSudhaniSurinameSvalbard uye Jan MayenSikwazirendiSiwidheniSiwizarendiSiriyaTaiwanTajikisitaniTanzaniaTairendiTimor-LesteTogoTokerauTongaTrinidhadhi neTobhagoTunisiyaTekiTekimenisitaniVokuTurkey zveTurks IslandsTuvaluUgandaUkireniMubatanidzwa Arabhu EmeretsiZimbabwe (UK)United States (US)United States (US) Minor Outlying IslandsUruguayUzebhekisitaniVanuatuVaticanVenezuelaVietnamMhandara Islands (British)Mhandara Islands (US)Wallis uye FutunaWestern SaharaYemeniZambiazimbabwe
Premium mhando yekirasi dhizaini yakakurumbira faucet: yakasimba ndarira isimbi isimbi yekugezera faucet 2321300C. Chekupedzisira cheC Chrome chinogona kutsungirira kuora. Yakakwirira chisimbiso ceramic capsule uye yekuchengetedza mvura neoperl aerator. Kaviri bata setup yekuyerera nyore uye yekudziya kwemvura tembiricha. (ndapota tarisa saizi yako yakadzika usati wahodha)
kugadzira, kukurumidza kubatanidza tekinoroji: yekutanga inokurumidza kukurumidza yekubatanidza chivakwa chiri nyore kuisa pachako pasina plumbi. Sevha pombi yekuisa mutero nehuni faucet. Iwo nzvimbo inoshandurwa pane zvako chaunoda. Inokodzera kubhadhara imba, makondomu matsva, imba imwe chete, mota pamba, vafambi vanofamba uye kushandiswa kweimba.
Kaviri gadzirisa setup yekuyerera kuri nyore uye mvura yekudziya controller Inokodzera kuhaya imba, makondomu matsva, imba imwe chete, mota pamba, fambi yekufambisa uye kushandiswa kwemumba.
SKU: 2321300C Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: yokugezera kunyura faucets, kubata kwakazara, yakapukutwa chrome
Ini ndakatenga faucet iyi kunyanya nekuti yaive imwe yemhando yakachipa yerudzi rwayo inowanikwa, asi kurerukirwa kwekumisikidza ndosaka ndaizotengazve. Mushure mekuisa zvigadzikiso, zvakasungwa munzvimbo nenzvimbo dzakabatanidzwa nenzungu pane kusimbisa nzungu dzakananga, izvo zvinobvisa marwadzo ekuyedza kutenderedza wrench inobatwa-refu mukamuri rakamanikidzika pasi pesingi. Saizvozvowo, iyo hosi inoda hapana kumonyanisa kana kumisikidza kuti ubatanidze, asi zvinongobaya nyore nyore pane izvo zvinogadzirwa.
Yangu chete nitpicks ndeyekuti drain chinhu hachisi nyore kuisa pane chero chimwe, uye kuti hosipaipi yeplastiki inoguma inoita kunge yakachipa uye ingangoita yekuneta nekutyora makore mashoma pasi pemutsara, asi zvese zvakanakira kubva ikozvino . Zvirokwazvo zvinokurudzira izvi kuti zvive nyore kuisa chete.
Ini ndaive nekanzuru misoro yakamutswa zvakare uye ndanga ndichitsvaga nzira ine mari yekupfeka yekugezera. Mabhomba aya aive sarudzo yakanakisa. Vakanga vari nyore kuisa uye kushanda zvine mutsindo. Iyo chaiyo yekudonha collar yaive yekukura kuti singi yangu ibvumidze iyo yese mvura kudhira mushe. Ndakavazivisa uye ivo vakanditumira ini kutsiva kudiki. Ichi chigadzirwa chakakosha kwazvo uye basa ravo rakasarudzika.
Iyi yakanaka yakanaka yekusiva pombi yangu yekugezera. Iyo ine yakachena sleek maitiro. Ini ndaitarisira kuti zvibato zviwedzere kureba, asi pandakangozvishandisa kashoma, zvinoita kunge zvakaringana. Murume wangu akaisa zvese zviri nyore kwazvo. Ini ndanga ndisina chokwadi nezve popup drain ficha, asi ini ndinoifarira zvirinani kupfuura iyo yekare drain lever mhando. Izvo zvinongo chengeta zvese zviri nyore kutarisa. Ndine iyo inopenya chrome kupera uye ndinoida. Mutengo wacho waive unodhura zvakanyanya kupfuura vamwe vandakatarisa. Ndiri kutarisira kunakidzwa neiyi kwenguva yakareba.
Isu tinoisa 2 seti yeaya mune yedu tenzi yekugezera. Iwo anobata anoshanda zvakatsetseka. Vanonzwa uye vanotaridzika zvakanaka. Vangave zvakapetwa zvakapetwa kuLowes, nezvimwe.
Pombi yakaunzwa nenguva uye yaive nyore kuisa. Zvakanditorera nguva yakawanda kubvisa chekare pane kuisa pombi nyowani.
Pombi iyi ndeye yekugezera mune tenzi yekurara. Isu takafadzwa kwazvo nehunhu hwechigadzirwa chemutengo
Iyi sombi faucet inogadzirwa neakanyanya mhando mhando. Inonzwa inorema sezita remhando inodhura. Inouya nezvose zvikamu zvinoda kuiswa. Dai yaive yakaisirwa svondo rapfuura uye inoshanda kwazvo kusvika parizvino! Ndichagadzirisa kana paine chinoshanduka.
Bhegi iri rakanaka! Iyo yakanaka mhando uye inoshanda kwazvo! Kusavimba kwakandivhiringidza zvishoma asi ini ndakanga ndichiri kugona kuisimbisa!
Ndinoda pombi iyi! Ini handina kuziva pandakairaira kuti iyo spout inogona kutenderera, inova chinhu chinobatsira chaicho!
Ida iyo nyowani nyowani seti yekuchangobva kugadziridzwa imba yekugezera! Yazvino kwazvo uye yakajeka.
Ndinoda pombi iyi. Ini ndakanyatsotenga maviri uye ese ari maviri anowirirana mune dzakasiyana dhayeti yekugezera. Inodhura uye yakasimba. Iyo pop up drain inoshanda zvakanaka uye zvaive nyore kuisa. Zviri nyore kuchenesa uye kunakidza!
Ini chaizvo handigoni kana kuputira musoro wangu kutenderedza mutengo weiyi faucet uye kuti yakanaka sei uye inoyevedza inotaridzika. Isu takanga tichitarisa zvakafanana paImba Depot neLowe kweanopfuura zvakapetwa mutengo. Iyi ndiyo yekutanga mbichana mbichana ini yandakamboisa uye yaive yekuseka nekukurumidza. Chikamu chakaomesesa ndechekucheresa ziso zvese uye kuve nechokwadi chekuti zvidimbu zvitatu zvinowirirana zvakakwana. Zvichienderana nehurefu hwetambo yekushandisa iwe yauri kushandisa unogona kubatanidza izvo usati wadzvanya iyo inotonhora kana inotonhorera munzvimbo, ingo ita shuwa kuti iwe une zvidimbu pazviri kuti uzvisimbise mukati. Ini pachokwadi handigoni kutaura zvakakwana zvakakwana zvinhu pamusoro peizvi. Icho chinhu chakakura uye 100% yakakosha peni yega yega !!
Ini ndichangobva kutenga nekuisa pombi iyi sechikamu chemuchina wekugezera. Ndiri kunyatsofara nesarudzo yangu yekutenga iyi mhando / modhi pamusoro pevamwe vandakatarisa uye ndikafunga. Iyo faucet inoyevedza muchitarisiko, inoshanda zvisina tsarukano uye yakanyatsofungidzirwa zvakanaka mukati mayo 'dhizaini uye kuvaka. Iyo yekukurumidza yekubatanidza mitsara ndeye chaiyo yekuwedzera uye yakareruka iyo yekuisa. Handina kuzomboona kudonha kana matambudziko panguva yekumisikidza, kana kubvira pandakatanga kushandisa pombi. Kunyangwe paine pop-up drain yakapihwa, sezvo ichi chimbuzi chiri kushandiswa mazuva ese, ini ndakasarudza imwe yekugezera ine bvisika inokurumidza yakachena yakachena yekubata tswanda. Ini ndinoronga kuisa iyo yakapihwa pop-up mune imwe isingashandisi yekugezera munguva pfupi iri kutevera.
Izvi zvinotaridzika zvakanaka mumakamuri ekugezera. Isu takatsiva edu ekare 1978 zvigadzirwa neizvi uye mutsauko hautendeseke. Iko kushushikana kunonzwa kusimba, uye iyo yepamusoro arch inoita kuti zvive nyore kuisa zvinhu pasi pesingi. Kureruka kwekuisa nako kwakaita kuti ndide aya mapombi ekunyura.
Muchembere Moen ari mubhavhu rekugezera akapa ndokutanga kudonhedza- pamusoro pekugadzirisa. Paida chinodhura chinotsiva. Ini ndainetseka neiyi, nekuti mutengo waive wakaderera. Ndakashamisika zvisingaiti payakasvika. Inotaridzika kunge yakanaka uye iwo mirairo yaive yakapfava yekutevera uye zvaive nyore kuisa (kunyangwe pandakanga ndine katsi ichisvetuka yakatenderedza kwandiri) Ini ndakatowana email kubva kuWOWOW kuve nechokwadi kuti yakandishandira. Anofara kwazvo nekutenga
Pakuvhura kurongedza kukuru pfungwa yangu yekutanga yaive yechokwadi yakachena, kupedzisa kukuru, kubatana kwakasimba kwendarira, kwakapinda nyore nyore… ndati izvi zvaingova muvhiki chete saka hapana ruzivo rwehupenyu hwayo hwakareba, asi kusvika parizvino ndinozvida
Ini ndaive ndisina chokwadi kana ndichihodha izvi nekuda kwemutengo. Ndakahodha 2 seti yangu tenzi yekugeza. Zvakanakisa!! Vanotaridzika akanaka uye akasimba. Pombi yangu yakafadzwa zvakanyanya. Kubva ikozvino ndinogona kukurudzira zvikuru!
Uku kwaive kutsiva pombi yekare yekugezera. Ini ndanga ndisingatarisiri yakanaka yakadaro! Mutengo wacho waive wakanaka, saka ndinofara kwazvo. Kuisirwa yaive mhepo. Hazvina kutora nguva kuti uiburitse mukati. Zvakatora nguva yakawanda kubvisa yekare. Uku kutenga kukuru!
Yakanaka ans zviri nyore kuisa. Ini ndinoda dhayagiramu mune tsananguro yechigadzirwa, izvo zvinondipa chivimbo chekuti inokwana zviripo pombi dzemvura munzvimbo yangu yekugezera. Uye inoshanda sekutarisirwa. Iko maonero akazara akakwana.
Takatenga pombi iyi yekugezera pachinzvimbo cheMoen kana Delta nekuda kwemusiyano wemutengo uye kusvika parizvino wakanaka. Iyo yakanaka kwazvo inotaridzika pombi uye yanga ichishanda mushe kusvika parizvino.
Yakanyanya kufadzwa nehunhu uye kupedzisa kwepombi iyi. Seyakanaka kana isiri yakanaka kupfuura mazita makuru mazita uye isingadhuri.
Wakatenga iyi tepi sekutsiva. Nyore kuisa. Ine chitarisiko chakanaka chemazuvano. Nyore kuchenesa. Pakati pezvikamu ndarira. Ida iyo pop up dhureni. Murume wangu akati yakavakwa zviri nani pane pombi yedu yekare inodhura.
Akaisa pombi mbiri muawa. Vanotaridzika zvakanaka kwazvo. Ida iyo yekumira yekumisikidza inosanganisirwa uye mitsara yekupa mvura. Parizvino chigadzirwa ichi chakakosha kukosha kwemari yako
Ida nzira idzo dzinotaridzika! Inoita imba yekugezera kutaridzika. Yakanyanya nyore kuisa uye ine chitarisiko chakatsetseka ichivaita nyore kuchenesa. Kushanda kwakanaka kwazvo uye kuyerera kukuru kwemvura.
Huru kuvandudza pane yazvino setup iyo yakatengwa neimba. Kugadzira kwekare kunodhura pamadhora zana nemakumi maviri kumasowes / home depot. Iyi modhi inobvumira kuyerera kwemvura kuri nani, zvinhu zvitsva uye kuiswa kuri nyore pamutengo unonzwisisika. Hunhu hunoratidzika kunge hukuru!
WOWOW Pamusoro Rakagadziriswa Pasi Mukicheni Faucets Imwe Hole USD59.98